९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने ! (हेर्नुस भिडियो) - Ukali Orali
९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने ! (हेर्नुस भिडियो)
उनीहरुको दुखलाई देखेर ९० वर्षे हजुर बुवा समेत सहयोग गर्नको लागि उनको डेरामा पुगेको थियो । यति धेरै सहयोग पाउदा अर्चनाको परिवारमा केहि भए पनि खुशियाली छाएको हामीले महशुस गरेका छौ । तपाई हरु पनि हामी मार्फत सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने 9861296721 सम्पर्क गर्नु होला । र तपाई सिधै अर्चनाको आमालाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ उहालाई 9865543220 मा सम्पर्क गर्नु होला ।
Homeसमाज९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने ! (हेर्नुस भिडियो)
← श्री बाग्लुंग कालिका मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् अघोर बाबाले यसरि गरे बिहे, बिहेपछी श्रीमतीसंगै पहिलो पटक मिडियामा (हेर्नुस भिडियो) →